White Hat Monsters eSEO | Martech Zone
Chipiri, July 3, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zvinogara zvakanaka kuona kumwe kuseka kuchishandiswa mune mamwe infographics. Uye zvakanyanyisa kunaka kuona avo vari muindasitiri vachisundidzira makuru SEO maitiro. Ndataura izvozvo SEO yakafa uye iyi infographic inotaura kune izvo zvisina kunangana. Ichokwadi ndechekuti kana iwe uine chikuva chakasimba chinopa zvemukati zvako nenzira kwayo, SEO ndicho chikamu chiri nyore cheiyo equation… chikamu chakaomarara chiri kunyora zvinomanikidza zvemukati izvo vateereri vako vari kuzogovana.
Iyi infographic kubva kuSmuggecko inonongedzera kune chimwe nechimwe chezvinhu zvacho ... aka mamonsters… mune yako SEO zano uye nemabatiro avanoshanda kuti vaone kuti zvemukati zvirinani zvakasimbiswa.
Tags: infographicseo infographicicho chikarangowani chenachena ngowani seowhitehat
Ndezvipi Vatengesi Vanofanira Kuziva Nezve HTML5
Jul 3, 2012 na12: 23 PM
Zvakanaka kuona vanhu vachinakidzwa neiyi infographic. Ndakanga ndine zvakawanda zvekunakidzwa kuzviita. Kune imwe munzira yayo iyo inotarisa kune yakaipa chikamu cheSEO.
Jul 3, 2012 na5: 06 PM
Kutarisira mberi kuona zvakaipa, zvakare! Ive neshuwa yekuwedzera zvikara zvinotengesa SEO asi zviri kunyatso backlinking nekusaziva kune mutengi. Ndivo vakomana vanonyatsondipisa!
Jul 3, 2012 na7: 18 PM
Ini ndichave ndichigadzira yakanyatsopatsanurwa infographic, yakanangana padanho rekutora chaiyo SEO kambani. Asi ndezve svondo rinouya 🙂
Sep 20, 2012 na10: 33 PM
Kududzirwa kwerudzi rwakasiyana rweiyo. inobatsira kwazvo kwandiri. basa rakanaka.